Yeezy Season 8 နဲ့အတူ ခပ်မိုက်မိုက်တွေ့ရမယ့် Kylie နဲ့ Kim – FemaleWear.net
Yeezy Season 8 နဲ့အတူ ခပ်မိုက်မိုက်တွေ့ရမယ့် Kylie နဲ့ Kim
ခန္ဓာကိုယ်ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ ညီမနှစ်ယောက် Kylie နဲ့ Kim ကတော့ Kanye West ရဲ့ Yeezy Season 8 အတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ guerrilla-style campaign မှာ ပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ street style ကို paparazzi တွေက မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
A post shared by KYLIE FANPAGE (@kylieglowing) on Jun 12, 2018 at 2:49am PDT
Kim ကတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူ Kanye West ကို တဘက်တလမ်းက ကူညီပြီး ညီမဖြစ်သူ Kylie နဲ့အတူ street style fashion ကို ဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးမြင်တွေ့ရအတိုင်း ညီမနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဖက်ရှင်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လွင်စေတဲ့ body fit ကိုယ်စီဝတ်ဆင်ပြီး Kylie ကတော့ အနက်ရောင် Yeezy ကို ဝတ်ဆင်ကာ စိမ်းပြာရောင် shoulder cross အိတ်ကို လွယ်ထားတဲ့ဖက်ရှင်ကို ဖန်းတီးခဲ့ပါတယ်။ Kim ကတော့ စိမ်းပြာရောင် Yeezy ကို ဝတ်ဆင်ပြီး နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဖက်ရှင်တွေက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပြန်ထင်ဟပ်သွားစေကာ လိုက်ဖက်အောင် ဖန်တီးထားပုံက ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင် တော်တော်လေးအမြှော်မြင်ကြီးပုံကို ပေါ်လွင်သွားစေပါတယ်။ အောက်မှာတော့ Kylie နဲ့ Kim ရဲ့ Yeezy fashion ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Who’s who?!?? @kyliejenner & @kimkardashian are practically clones decked out in head-to-toe #Yeezy – check out our story for all of the WILD looks from the photoshoot! #kyliejenner #kimkardashian #kanyewest #yeezyseason #KUWTK
A post shared by toofab (@toofabnews) on Jun 12, 2018 at 2:24pm PDT
Thick moms shooting for yeezy? (Follow @kylie.babes for more) -copyrights go to they’re respectful owner♥
A post shared by Kylie Jenner? (@kylie.babes) on Jun 12, 2018 at 7:04am PDT
Tags: Celebrity, Celebrity Fashion Line, Fashion
Ocean’s 8 ရုပ်ရှင်ရဲ့ စိန်လည်ဆွဲဟာ အတုလား အစစ်လား???